स्टेशन र तिनीहरूलाई उपकरण को सुधार भर्नु को नेटवर्क को विकास गर्न प्रमुख देश सडक मा विभिन्न उद्देश्यका लागि कार को संख्या मा वृद्धि। उच्च कार्यात्मक र पारिस्थितिक गुण संग वृद्धि ब्यान्डविथ, गति इन्धन भर्ने वाहन, इन्धन तेल दायरा भर्नु।
ग्याँस स्टेशन को प्रकार
पेट्रोल स्टेशन अनुसार यस संग समूहमा विभाजित गर्न सकिन्छ आगो सुरक्षा नियम NPB 111-98।
परम्परागत निश्चित ग्याँस स्टेशन - एक राजधानी संरचना छ भूमिगत ट्यांक, को dispensers देखि एक दूरी मा स्थित जुन। तिनीहरूलाई ठाँउ, डिजाइन, निर्माण र भवन कोड, स्तर र आगो सुरक्षा को लागि नियमहरु संग सख्त अनुपालन मा सञ्चालन।
र ब्लक ईंन्धन संग भण्डारण कन्टेनर स्तम्भहरू अन्तरालमा छन् जसमा स्थिर स्टेशन, स्तम्भहरू subsurface जलाशय माथि प्रबन्ध जुन, र मड्यूलर छन्।
आफ्नै वाहन को एक ठूलो संख्या धेरै कारोबार यसको आफ्नै आवश्यकता इन्धन भर्ने बिन्दु को लागि आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका छन्।
मोबाइल स्टेशन भरने - तरल मोटर ईंन्धन को एक प्रकारको एक ट्रक चेसिस मा एक ट्यांक।
र अन्तिम, हालै प्राप्त व्यापक ग्याँस स्टेशन को प्रकारको - एक कन्टेनर भर्ने स्टेशन हो।
यस प्रकारका ग्याँस स्टेशन विभागीय वाहन fueling लागि, सानो समुदायमा प्रयोग गरिन्छ, र गर्मी मा - व्यक्तिगत वाहन।
ग्याँस स्टेशन, कन्टेनर प्रकार
कन्टेनर स्थापना गर्न भरने स्टेशन बाहिर earthworks, नींव बोक्न र जटिल इन्धन नाली वेल्स संगठित गर्न, आकस्मिक इन्धन spillage को संग्रह लागि कन्टेनर को स्थापना प्रदर्शन आवश्यक छैन। तर, तैपनि, कुनै पनि कन्टेनर स्टेशन भरने आगो सुरक्षा को आवश्यकताहरु संग सख्त अनुसार बनेको छ। इन्धन भण्डारण कन्टेनर compartments firebreak विभाजित एक धातु संरचना रूपमा गठन गरिएको छ।
यो इन्धन भर्ने खण्ड स्थित dispensers। अलग compartments इन्धन भण्डारण ट्यांक र इन्धन यसलाई भर्नका लागि विस्फोट-प्रमाण स्थानान्तरण पम्प छन्।
प्रविधि र उपकरण ट्यांक को प्वाल मा माउन्ट हुन सक्दैन, र त्यसपछि कन्टेनर को शीर्ष मा यो उपकरण सेवा हो को लागि एक घेरेदार आंगन खेल मैदान छ। त्यहाँ विकल्पहरू KAZS उपकरण एक विशेष प्रविधिको छेउमा कक्ष मा स्थित छ जसमा डिजाइन, छन्।
ग्याँस स्टेशन डिजाइन सबै साधारण जमीन ट्यांक को स्थान र कन्टेनर स्तम्भहरू व्यवस्था छ।
प्याकेजिङ्ग कन्टेनर भरने स्टेशन
कन्टेनर स्टेशन भरने दुई वा बढी comprises कन्टेनर: कन्टेनर इन्धन भण्डारण (एक वा बढी) र जो पनि अपरेटर वा प्रेषण केन्द्र कन्टेनर नियन्त्रणमा भनिन्छ।
नियन्त्रण कन्टेनर गणना गर्न सकिन्छ कार्यस्थल को अपरेटर को स्थान मा, तर पनि बाँकी कोठा वा गोदाम मात्र छैन। अपरेटर आन्तरिक प्रकाश र ताराहरु संग प्रदान गरिएको छ, त्यहाँ प्रबन्ध छन् वक्ता उपकरण नियन्त्रण। प्याकेज एक शक्ति कैबिनेट, प्रयोगशाला र मैट्रोलोजी उपकरण, सार्वजनिक ठेगाना सिस्टम समावेश हुन सक्छ।
कन्टेनर स्टेशन भरने एक चार प्रजाति देखि इन्धन गणना गर्न सकिन्छ।
को ट्यांक, एकल पर्खाल वा डबल, को क्षमता तीन चालीस गर्न घन मीटर देखि हुन सक्छ। तेल कम्पनी "Lukoil" ग्याँस स्टेशन, 40 घन मीटर को कन्टेनर प्रकार आदेश क्षमता। आर्कटिक र सुदूर उत्तर को climatic अवस्थामा परिचालन संभावना संग मीटर।
यो तेल व्यापार को दिग्गज एक मिनी-लाउने आवश्यकता छैन कि जस्तो थियो, तर लक्ष्य फरक छन्। Chetyrehkubovuyu सानो कन्टेनर भरने स्टेशन "Gazpromneft", छैन कम ज्ञात रूसी कम्पनी यसको आफ्नै आवश्यकताको प्रयोग गर्दछ।
म तर्फ रहन र अर्को तेल विशाल छैन। OAO "Gazprom" ग्याँस जीएसएम-संचार अपरेटर स्तम्भ संग आदेश आफ्नै वाहन लागि स्टेशन।
इन्धन भण्डारण कन्टेनर
इन्धन भण्डारण ट्यांकी फरक क्षमता र one-, two-, three- वा चार-भाग को विभिन्न प्रकारका कन्टेनर संग सुसज्जित छन्। को dispensers पनि प्रकार भिन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
पेट्रोल स्टेशन मा आगो सुरक्षा को पर्खालहरु बीच स्पेस जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु वा ग्याँस भरिएको छ जसमा डबल-पर्खालले घेरिएको ट्यांक, प्रयोग र स्थापित हुनुपर्छ रिसाव नियन्त्रण सेन्सर।
प्रक्रिया उपकरण मात्र जो मार्फत ट्यांक को वितरण इन्धन ट्यूब मिटरिङ्ग ट्यूब र ogneograditeli, बन्द-बन्द इन्धन र, Manholes, माथिल्लो स्तर सेन्सर, तर र वाल्व निकास भरिएको छ एक ट्यूब समावेश छ। जलाशय र पाइप, वैकल्पिक स्टेनलेस वा चिसो2मिमी मोटी देखि उच्च गुणवत्ता इस्पात बनेको छन्।
कन्टेनर स्टेशन भरने गाउँमा बाहिर स्थित छ भने गिरा इन्धन संकलन गर्न एक ट्रे संग एकल पर्खाल ट्यांक, प्रयोग गर्न सकिन्छ।
को dispensers उदाहरणका लागि, कि त एकल-हात हुन सक्छ, "पुखराज-511" र dvuhpistoletnye र पनि trehrukavnye। उदाहरणका लागि, OAO "Gazprom" ग्याँस सुसज्जित मुख्य trehrukavnoy को विफलता को घटना मा दुई ईंन्धन लागि एक अतिरिक्त स्तम्भ संग स्टेशन गर्न।
रूपमा थप उपकरण कन्टेनर स्टेशन भरने मा विभिन्न उद्देश्यका लागि स्थापित गर्न सकिन्छ अडान-एक्लै प्रणाली।
मानव हस्तक्षेप र स्टेशन स्वतन्त्र भर्ने इन्धन को स्थापना सिस्टम भर्नु बाह्य नियन्त्रण प्रणाली को उपस्थिति बिना। माइक्रो कम्प्यूटर, पाठक प्रोक्सी-कार्ड र किबोर्ड (बुझाइएको इन्धन सीमा बारे व्यक्तिगत जानकारी चुम्बकीय कार्ड) प्रत्येक इन्धन dispensers मा स्थापित गर्दै छन्, र यो स्वतन्त्र काम गर्दछ। यस मामला मा, स्तम्भ एकल-हात, र इन्धन धेरै प्रकार को लागि डिजाइन या त हुन सक्छ।
टाउको कार्यालय मा केन्द्रिय कम्प्युटर व्यक्तिगत स्तम्भहरू जीएसएम-संचार प्रयोग गरेर जानकारी प्रक्रियाहरु।
ईंन्धन KAZS देखि कम्तिमा तीन मिटर दूरी मा स्थापित गर्न टर्मिनलहरु देखि स्वतन्त्र दिइँदैन गर्न सकिन्छ। टर्मिनलहरु साधारण बैंक कार्ड या त हुन सक्छ, र यस्तो अब, आफ्नै प्रयोगको लागि कार्डहरू सीमित गर्न।
थप कन्टेनर स्टेशन भरने ग्राहक सेट आगो प्रणाली र ट्यांक स्तर नियन्त्रण प्रणाली बुझाने अनुसार। उदाहरणका लागि, कन्टेनर भरने स्टेशन "Gazpromneft" आगो दमन सिस्टम "Buran" र स्तर-प्रकार PMP कम्पनी "सेन्सर" संग सुसज्जित छ। को ट्रान्समिटर ट्यांक मा तरल स्तर, यसको तापमान, घनत्व र मात्रा मापन गर्न सक्नुहुन्छ।
ग्याँस स्टेशन लागि कन्टेनर "Lukoil"
सबै भन्दा ठूलो रूसी तेल कम्पनीहरु को एक लागि ग्याँस स्टेशन बारेमा एक परियोजना केही निर्माता उत्पादन। सुदूर उत्तर र पश्चिमी साइबेरिया मा पूर्ण-fledged मोबाइल भरने स्टेशन रूपमा प्रयोग को लागि अभिप्रेरित नेटवर्क KAZS।
को dispensers र reservoirs भण्डारण र तीन प्रकारका प्रदर्शन गर्न ईंन्धन: डीजल इन्धन पेट्रोल ऐ-80 र ऐ-92 बदलिने तापमान मा -60 देखि +40 ° सी मा
आधुनिक स्वचालन प्रणाली ट्यांक को भरने, भण्डारण ईंन्धन र आफ्नो वितरण अवस्था अनुगमन।
KAZS दुई हतियार रुपैया-485 इन्टरफेस मार्फत टाढाको नियन्त्रण गर्न जडान दुई इन्धन dispensers संग सुसज्जित छन्।
मूल्य KAZS प्रभावित कारक
निर्माता प्रत्येक व्यक्तिगत ग्याँस स्टेशन को अग्रिम लागत एक गणना गर्न सक्दैन। कन्टेनर भर्नको लागि स्टेशन मूल्यहरु धेरै कारक निर्भर र बजार आज दायरा 160 हजार 4.5 मिलियन rubles देखि मा।
मुख्य कारक कन्टेनर र आफ्नो आवाज संख्या छ। एक घन मीटर को जलाशय मात्रा इन्धन को एक प्रकार, 40 घन मीटर को एक मात्रा लागि डिजाइन गरिएको छ। एम - लागि तीन।
अर्को कारक - ईंन्धन मिटरिङ्ग प्रणाली र यसको स्वचालन को शुद्धता। नगद रजिस्टर, कम्प्युटर, विशेष सफ्टवेयर, केन्द्रीय कार्यालय उन्नत संचार ग्राहक को अनुरोध मा ग्याँस स्टेशन मा स्थापित गर्न सकिन्छ र, पाठ्यक्रम, मूल्य असर गर्छ।
सबै ग्राहकहरु आफ्नो व्यक्तिगत स्टेशन भरने नियन्त्रण स्टेशन (अपरेटर) बन्डल। र यो एक अलग कन्टेनर छ, र यो मूल्य धेरै असर गर्छ।
विभिन्न मूल्य फरक KAZS climatic प्रदर्शन। एक विशेष चिसो प्रतिरोधी इस्पात प्रयोग गरेर ट्यांक को निर्माण को लागि, अक्सर इन्धन ताप सिस्टम पाइप मा स्थापित गरिन्छ, त्यो छैन।
विकल्पहरू पनि ग्याँस स्टेशन को मूल्य असर गर्छ। Dispensers डिजाइन, प्रकार, र निर्माता माउन्ट को विधि मा फरक हुन्छन्। पनि जर्मनी, इटाली, रूस र चीन देखि नै वक्ता बारेमा एकदम मूल्य मा फरक हुन्छन्।
पम्प क्षमता, एक डिजाइन को ट्रान्समिटर को उपस्थिति, घटक - यी क्षणमा महत्त्वपूर्ण छन् र मूल्य मा प्रभाव बनाउन।
मूल्य निश्चित ग्याँस स्टेशन को विकल्प मा एक महत्वपूर्ण तर्क छ। तर चयन गर्न यो आवश्यक गुणस्तर घटक र सामाग्री सबै एउटै हो। यी कारणहरूले कन्टेनर स्टेशन भरने को सुरक्षित र लगातार कार्यका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छन्।
सी-400। एस-400 "ट्राइंफ"। एस-400 मिसाइल सिस्टम
ठोस घरेलू बर्बाद लागि Pyrolysis बोट
त्यो जर्मन चाँदीको एक भाग हो?
ट्यांक "Merkava" - रथहरू IDF
कान मा तरल पदार्थ: कारणहरू, लक्षण र उपचार सुविधा
Virility। को potency कसरी कायम गर्ने? भिटामिन। लोक उपचार
Mammoth हात्तीको दात: खानी Mammoth tusks, Mammoth हाथीदांत उत्पादनहरु
अभिनेत्री Liubava Greshnova: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन। शीर्ष चलचित्र
होटल फिस्टा बीच4* (टुनिस, जर्बा): छुट्टी चित्र र समीक्षाहरू
Concertina तार, र आफ्नो उद्देश्य
अचम्मको च्याउ chesnochnik
विचार र कल्पना लागि ठाउँ - "आनन्द" को विषय मा काम गर्दछ